Football Khabar » नाटकीय खेल : गोलकिपरलाई रातो कार्ड, दुई पेनाल्टी मिस अनि सिटीको नमिठो हार !
नाटकीय खेल : गोलकिपरलाई रातो कार्ड, दुई पेनाल्टी मिस अनि सिटीको नमिठो हार !
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा गत राति भएको नाटकीय खेलमा म्याचनेस्टर सिटी पराजित भएको छ । यो सिजन दोस्रो लेगको खेल खेल्न अवे मैदानमा उत्रिएको सिटीलाई उल्भ्सले ३–२ ले स्तब्ध बनायो । जारी सिजन सिटीको यो पाँचौं हार हो ।
पटक–पटक नाटकीय मोड देखिएको खेलमा सिटीका गोलकिपरले खेलको १२औं मिनेटमै रातो कार्ड पाए भने सिटीले दुई पेनाल्टी मिस गरेको थियो । त्यस्तै, १० खेलाडीमा सीमित पाहुना टोली सिटीले ०–२ को अग्रता बनाए पनि दोस्रो हाफमा घरेलु टोली उल्भ्सले ३ गोल हानेर शानदार पुनरागमन जित निकाल्यो ।
खेलको १२औं मिनेटमा सिटीका गोलकिपर इडर्सनले रातो कार्ड खाएपछि सिटीलाई ठूलो झट्का लागेको थियो । उल्भ्सका खेलाडी लामो दूरीको हाई पास बल लिएर सिटीको पोस्टतिर अघि बढेका बेला गोलकिपर इडर्सन अगाडि बढे र बक्सबाहिर आएर हातले बल छेकेपछि उनलाई रेफ्रीले सोझै रातो कार्ड दिए ।
त्यसपछि प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले फरवार्ड सर्जियो अगुएरोलाई निकालेर गोलकिपर ब्राभोलाई मैदान पठाए । त्यसपछि सिटी सम्हालिएर खेलिरहेको थियो ।
खेलको २४औं मिनेटमा सिटीले घरेलु टोलीविरुद्ध पेनाल्टी पायो । उल्भ्सका डिफेन्डरले बक्समा सिटीका रियाद महारेजलाई लडाएपछि सिटीले भिएरआरबाट पेनाल्टी पायो । पेनाल्टी रहिम स्टर्लिङले हाने । तर, उनका लगातार दुई पेनाल्टी मिए भए ।
पहिलोपटक उनले हानेको पेनाल्टी उल्भ्सका गोलकिपरले रोकेका थिए । तर, रेफ्रीले भिएआरबाट पेनाल्टी नियमसंगत नभएको भन्दै दोस्रोपटक पेनाल्टी हान्न दिए । सो पेनाल्टी पनि स्टर्लिङले नै हाने । तर, दोस्रोपटक पनि उनको पेनाल्टी गोलकिपरले रोकेका थिए । तर, गोलकिपरबाट रिबाउन्ड भएर आएको बलमा साइड परिवर्तन गर्दै स्टर्लिङले सहजै गोल गरेपछि सिटीले खेलमा अग्रता लियो ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा रोमाञ्चक दृश्य देखिए । खेलको ५०औं मिनेटमा सिटीका लागि स्टर्लिङले नै गोल गरेर टिमलाई ०–२ को अग्रतासहित जितका बाटो देखाएका थिए । तर, २ गोल खाएर पछि परेको उल्भ्सले हिम्मत हारेन । र, त्यसपछिको समयलाई आफ्नो बनायो । उसले लगालग ३ गोल ठोकेर खेल नै उल्टाइदियो ।
उल्भ्सका लागि दोस्रो गोल खाएको ३ मिनेटमै अडामा ट्राओरेले भुइँ प्रहारबाट सुन्दर गोल गरेर खेल १–२ बनाए । त्यसपछि पनि उल्भ्सले दबाब कायमै राख्यो । सोहीक्रममा खेलको ८२औं मिनेटमा राउल जिमेन्जले गोल गरेर खेल २–२ बनाए ।
उल्भ्स त्यत्तिमै अडिएन । खेलको अन्तिम ८९औं मिनेटमा घेलु टोलीका लागि म्याट डोहर्टीले गोल गरेपछि खेल उल्भ्सले ३–२ ले जित्यो । र, सिटी नमिठो हारको सिकार भयो ।
यससँगै सिटी एकै सिजन उल्भ्ससँग दुई खेलमा नमिठो गरी हारेको छ । यसअघि पहिलो लेगको खेलमा उल्भ्सले सिटीलाई उसकै घरमा ०–२ को लज्जास्पद हार चखाएको थियो । र, यसपटक फेरि सिटीमाथि सोही टिमले उस्तै सनसनीपूर्ण जित निकाल्यो ।
अब यो जितपछि उल्भ्स १९ खेलबाट ३० अंक जोडेर लिगको पाँचौं स्थानमा चढेको छ । उसले टोटनह्यामलाई पछि पारेको हो । यता, पराजित सिटी समान खेलबाट मात्रै ३८ अंक बनाएर तेस्रो स्थानमा छ । सिटी अब दोस्रो स्थानको लेस्टर सिटी भन्दा १ अंले पछि छ भने लिग लिडर लिभरपुलभन्दा १४ अंकले पछि परेको छ । सिटीका लागि अब उपाधि होडमा फर्किन करिब–करिब असम्भवजस्तै देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति १२ पुष २०७६, शनिबार ०८:५१